यौ’न क्ष’मता बढाउने घरेलु ११ खानेकुरा ! | यौ’न क्ष’मता बढाउने घरेलु ११ खानेकुरा ! – हिपमत
राष्ट्रपति र विपक्षी नेताबीच भेटघाट : के थियो एजेण्डा ?
यौ’न क्ष’मता बढाउने घरेलु ११ खानेकुरा !
याै’न क्षमता बढाउने चाहाना हरेकलाइ हुन्छ । तरपनि हामिले यस बिषयमा ध्यान दिएका हुदैनाै । अाज हामिले केहि घरेलु उपाय बारे जानकारी दिदैछाै । यी घरमै पाइने चिजहरू नियमित खाँदा याै’न क्ष’मतामा बृद्धि हुने अनुसन्धानबाट पनि देखिएको छ ।
यौ’न क्ष’मता बढाउने ११ खानेकुरा
खरबुजामा सिटुलाइन नाम गरेको एमिनो ए’सिड प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, जसले यौ’नांगमा रक्तसञ्चार तीव्र पार्छ । यौ’नांगमा रक्तसञ्चार तीव्र पार्नकै लागेर भि’याग्रा लिने गरिन्छ ।
अदुवा खानाले यौ’नांगसहित शरीरका सबै भागमा रक्त’सञ्चार तीव्र हुन्छ । से’क्सअघि अदुवा हालेको चिया खाने गरेमा शरीर तात्छ, मुटुको धड्कन र रक्तसञ्चार तीव्र हुन्छन् ।
एभोकाडोमा भिटामिन बी–६ र पोटासियम प्रचुर मात्रामा पाइन्छन् । भिटामिन बी–६ ले पुरुषमा से’क्स हा’र्मोन बढाउने गर्छ । पोटासियमले महिलाको थाइरा’इड ग्र’न्थिलाई स्वस्थ राख्छ । थाइ’राइड ग्रन्थिको सम्बन्ध व्यक्तिको यौ’न क्षमतासँग हुन्छ । एभोकाडोमा फोलिक ए’सिड पनि प्रशस्त पाइन्छ, जसले शरीरलाई ऊर्जा दिने काम गर्छ ।
तुलसीको पाउडर अथवा तेल शरीरमा द’ल्नाले अथवा तुलसीको पात खानाले शरीरमा यौ’न हा’र्मोनको उत्सर्जन बढ्छ ।
लसुनमा एलिसिन नामक तत्व पाइन्छ, जसले यौ’नांगमा र’क्तसञ्चार तीव्र गराउँछ । राम्रो यौ’न जीवनको चाहना गर्नेले लसुनको प्रयोग नियमित गर्नुपर्छ ।
बदाममा फ्याटी एसि’ड बढी मात्रामा पाइन्छ, जसले शरीरमा यौ’न हार्मोनको उत्सर्जन बढाउँछ । बदाममा पुरुषको यौ’नांगमा रक्तसञ्चार तीव्र गराउने तत्वसमेत पाइन्छ ।
कुरिलोमा भिटामिन–ई र फोलाइट पाइन्छन्, जसले पुरुष तथा महिला दुवैलाई यौ’नका क्र’ममा चर’मोत्कर्षमा चाँडै पुग्न सघाउ पु¥याउँछ ।
केरामा ब्रोमेलाइन नामक इन्जाइम प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यसले का’मोत्तेजना बढाउने गर्छ । त्यसै गरी यसमा पाइने पोटासियम र भिटामिन–बीले पुरुष तथा महिला दुवैमा से’क्स’ हा’र्मोन बढाउने गर्छन् ।
अण्डामा भिटामिन बी ६ र भिटामिन बी ५ प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यिनले से’क्स हा’र्मोनसहित समग्र हा’र्मोनलाई सन्तुलनमा राख्ने गर्छन् । यसमा पाइने भिटामिन बी १२ ले पुरुषमा टेस्टोस्टेरोन हा’र्मोन बढाउने गर्छ ।
रातो खुर्सानी खानाले मुड बनाउने इन्डोर्फिन नामक तŒव शरीरमा बढी रिलिज हुन्छ । यसबाट र’क्तसञ्चार तीव्र बन्छ । स्वस्थ यौ’न जीवनका लागि तीव्र रक्तसञ्चार आवश्यक छ ।
फर्सीको बियाँमा ओमेगा–३ नामक फ्याटी एसि’ड र जिंक पाइन्छन् । यसले हा’र्मोन उत्पादनलाई तीव्र बनाउने काम गर्छ ।
बुधबार, आषाढ ०३, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
कला क्षेत्रमा नाम र दाम कमाउने रहर छ -रितु राई
मिस कोशीमा १७ जना छनौट, दोस्रो र तेस्रो अडिसन पनि हुने
कलाकार दिपक मैथाने मगरले आफ्नो जन्मदिन सार्वजनिक गरे ‘बैगुनीु (भिडियो सहित)
रानी शाक्य र सम्राट चौलागाईको डान्सिङ गीत कुमाल किरिमको रिलिज ( भिडियो )
६० वर्ष पुगेपछि गायक गणेश थापाको स्वरमा नयाँ गीत ‘आयो तिम्रो राजा’
नागरिक संवाद केन्द्र बिराटनगरद्धारा एक दिने अन्तरक्रिया
उखु खेतीमा सुँगुर आतंक
सामुदायिक स्कुलको यो कुरा गलत हो है